UJULIANNE HOUGH KWIMPIKISWANO YEBLACKFACE, UMLOBI OLWELA UMVA - IINDABA
UJulianne Hough Kwimpikiswano yeBlackface, uMlobi olwela uMva
Umdaniso wangaphambili kunye neenkwenkwezi ngumdanisi onesakhono kwaye ukhethe u-Julianne Hough ukhuphe uxwebhu losasazo malunga nokubuyela umva komdlalo wakhe omtsha okhuphisana ne-CBS obonisa uMlobi. Uye wongeza kwingxoxo yobuso obumnyama ka-2013 ethe yavela ngaphakathi kwengxelo egxeka umboniso wakhe omtsha. Nantsi into ekufuneka eyi-Hough ukuyithetha.
U-Hough uthi 'Uphulaphule ngokunyanisekileyo' kwiCriticism
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, u-Hough nabanye abachaphazelekayo kwi-Activist bebephantsi komlilo ngabagxeki babiza ukhetho lokukhanya okuluhlaza okwenyani kubonisa ukuba kujongela phantsi yonke into ebusebenzayo.
Itshantliziyo ngumboniso wokhuphiswano lokwenyani olubonisa apho amatshantliziyo eza kukhuphisana kwimishini, kwimithombo yeendaba, kwimikhankaso yedijithali, nakwimisitho yamaqela ejolise ekufumaneni iliso labona benza izigqibo banamandla kwihlabathi, ngokuhambelana nokuphehlelelwa kwe-CBS.
Kwimpapasho ye-Instagram, uHough ubhale ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ibingumboniso wobungqongqo bexesha lokwenyani.
Ibango likaHough liyaqhubeka:
Enkosi ngokusebenzisa amazwi akho, undibizela ngaphakathi, ukuphendula kwakho, kunye nokunyaniseka kwakho. Ndiphulaphule ngokunzulu ngentliziyo evulekileyo kunye neengcinga:
Emva kokuphehlelelwa koonondaba besithi Itshantliziyo, ndeva usithi lo mboniso wawusebenza, ukhuthaza ubutshantshintshi bobuqhetseba ngaphezulu kwentshukumo, waziva ungeva, njenge-'Isipili esiMnyama, iMidlalo yeNdlala, kwaye imikhosi yayingaqinisekiswanga ukuvavanya ubutshantliziyo njengesiphumo sokuba singoosaziwayo kwaye singaze sibe ngamatshantliziyo.
Ndive usithi kukho uhanahaniso ngaphakathi komboniso ngenxa yengcambu yobutshantliziyo kukulwa ubukapitali kunye nengozi ebangela abantu abaninzi kwaye umboniso ngokwawo uziva ngathi ngumzamo wokuthimba.
Ndaye ndakuva usithi ukuzama ukuxabisa omnye komnye kuvakala ngathi ziiOlimpiki zoCinezelo kwaye ndiphoswe ngokupheleleyo kwaye ndingabahloniphi abatshakazi abaninzi abaye babulawa, bahlaselwa, kwaye bajongana nokuphathwa gadalala okuninzi okulwela izizathu zakhe.
Kwaye ngenxa yako konke oku, kukho imvakalelo yokuthukwa, ukuthotywa kwesidima, ukungakhathali kunye nomonakalo oviwa ngokufanelekileyo.
Uqhubeke wathi akazibhengezi njengelitshantliziyo kwaye uyaqonda ukuba icandelo lokugweba lomboniso luphose uphawu.
Ngaba uHlu unayo i-riverdale
Kuvakala kufanelekile ukuba ndibelane nabanye ngesizathu endisayinileyo kulo mboniso sisiphumo sokuba bendihlala ndichulumancile ukuba yinxalenye yento enye ebalaselisayo, kwaye ijolise ekujongeni umsebenzi wabaphembeleli kwiqonga elikhulu, Waqhubeka uHough. Ngokwenza njalo, ndaziva ngathi izokunceda ukufundisa, ukudibanisa, kunye nokukhuthaza abantu kwihlabathi liphela ukuba bazibandakanye ekusebenzeni ngenxa yesiphumo sexabiso esifuna ukuqwalaselwa, inkxaso-mali, kwaye okona kubaluleke kakhulu, amandla okuba nefuthe lotshintsho.
Uye wathembisa ukuba akazukubuyela umva kule ncoko imbi nengonwabisiyo.
Ndizinikezele ekubeni ndilapha apha kuyo yonke into… Ndabelana nabanye malunga nezinto zam kunye namagunya akhoyo, endicinga ukuba bamamele. Ndinenkolo kunye nokuzithemba phakathi kwabantu abathandekayo endikhe ndasebenza nabo baya kwenza ukhetho oluchanekileyo kwaye benze into echanekileyo yokudlulisela phambili. Ayisiyomboniso wodwa, kodwa ukulunga okuphezulu, utshilo uHough, kubandakanya, ndiza kuqhubeka nokunikela ingqalelo, ukungafundi, ukufundiswa kunye nokuthatha ixesha lokuba ndibekho ngoku kunye nayo yonke into ekwabelwana ngayo Isiphumo sokuba andinqweneli ukusabela ngokulula. Ndinqwenela ukwetyisa, ndibone kwaye ndiphendule ngeendlela eziyinyani kwaye zilungelelaniswe nenenekazi endiguquka kulo.
U-Hough Kwakhona waphinda waphinda wamcinezela 'ukhetho olubi' lokunxiba i-Blackface
NgeHalloween ka-2013, uHough wayenxibe njengomlinganiswa ka-Uzo Aduba ovela kwi-Orenji Ngaba uMnyama oMtsha, kunye nokuthwala imake-up kumngxunya wakhe kunye nolusu olwalusaziwa njenge-blackface. Uye waxolisa emva koko kwi-tweet, kwaye ngokukhawuleza waxolisa ngokukhetha kwakhe kakubi.
Kwintetho yakhe ye-Instagram, uHough wabhala, Abantu abaninzi bajika nje bazi ukuba ndinxibe i-blackface kwi-2013, eyongeze kuphela isithuko esenzakalisayo. Ukunxiba i-blackface yayilukhetho oluhlwempuzekileyo ikakhulu lusekwe lilungelo elilodwa elimhlophe kunye nomzimba omhlophe okonakalisa abantu kwaye yinto enye endizisolayo ngayo namhlanje. Nangona kunjalo, ukuzisola ngokuba ndihlala neepaley xa kuthelekiswa namava abaphila kangaka. Ukuzinikezela kwam kuye kwaba sisipili kwaye ndenze ngendlela eyahlukileyo. Hayi ngokupheleleyo, kodwa ke ngethemba ngokuqonda okuphucukileyo ukuba ubuhlanga kunye nokuphakama kwabamhlophe kuyingozi kubo BONKE abantu.
U-Hough ukugqibile ukupapasha esithi, ndiyaqonda ukuba akukho nto injengempendulo endinokwabelana ngayo enokwenza wonke umntu onwabe, nangona kunjalo, ndifuna uyazi ukuba yincoko yababini kwaye ndimamele nangona kunjalo.
Iiveki ezintlanu zexesha lokuLwela iNkulumbuso liqala ngolwesiHlanu, Okthobha 22 ngentsimbi yesi-8. Amaxesha aseMpuma nasePacific kwi-CBS. Ukudanisa ngeeNkwenkwezi zexesha lonyaka le-30 ngoMvulo, nge-20 kaSeptemba, ngo-2021, ngo-8 ebusuku. Amaxesha aseMpuma nasePacific kwiABC.
Izigaba: Umqala Hollywood Inetflix
ukutya okukhawulezayo okuvulwe ngoJulayi 4
dibanisa amanani amabini eballball
dean waite megan ulahlekile
Ngaba ujane fonda unabo na abantwana